Enwere ike ịhazi ya dịka mkpa ndị ahịa si dị, nha nke tank, agba, ọkwa seismic, wdg.
Ugwu a na-echekwa mmiri
GFS TANK na-enye mmiri nchekwa / mmiri dị mma na mpaghara ụfọdụ pụrụ iche (ugwu, agwaetiti, mpaghara ọzara) .Gịnị kpatara ya? 1. Uru dị na njem - tankị GFS na-esite n’ezie enta nchara mee ya. Anyị enwetaghị tank ebe ahụ, anyị nwetara plate steel.Ọ nwere ike ịga ebe ọ bụla ndị mmadụ nwere ike ịga. 2. Mwube ihe owuwu - mgbe mbadamba ígwè ahụ rutere na saịtị ahụ, a ga-achịkọta ha site na mkpọchi, belata ngwa ngwa na obere oge. Ọ dịghị mkpa maka ndị ọkachamara, ọ dịghị mkpa nha maka ọnụ ahịa dị elu ...
A nwekwara ike iji BSL GFS tank mee ihe dị ka mmiri ọkụ, gbakọtara na mpaghara ụlọ ọrụ, mpaghara obibi na ụlọ ndị dị elu. Ọ dị mfe ịgbakọta ma nwee ndụ ogologo ọrụ. Ntụziaka nwụnye maka mmiri mmiri ọkụ: 1. Ala kwesịrị ịdị mbadamba, ala kwesịrị ịnwe mkpokọta ahụ ụlọ elu mmiri mgbe mmiri jupụtara, na ala ahụ enweghị ihe dị nkọ. 2, 5 tọn na n'okpuru (gụnyere 5 tọn) ngwaahịa anaghị achọ nlebara anya dị ukwuu, ngwaahịa ca ...
Ngwa itinye ebe eji echekwa mmiri ga etinye ya na ebe nchekwa miri na ebe nchekwa di. Oge nrụnye dị mkpụmkpụ, yana enwere ike idozi ogo na agba nke mmiri nchekwa, nke dabara adaba maka ihe ubi. Iji hụ na nchekwa nke mmiri ọ drinkingụ drinkingụ, anyị kwesịrị ịhọrọ mmiri na-adịghị egbu egbu, nke na-adịghị emerụ ahụ, nchekwa na nchekwa ọ.ụ drinkingụ nke mmiri na-a.ụ mmiri .Ọbụ nke nchekwa mmiri nwere ike ghara iru oke nke nchekwa mmiri dị mma, yana n'ihi nnukwu volu .. .